E6010 bụ electrode na-arụ ọrụ nke cellulosic sodium. Enwere ike ịgbado ọkụ maka ọnọdụ niile (ọkachasị maka ọnọdụ kwụ ọtọ) ya na DC + naanị. Ọ nwere magburu onwe ịgbado ọkụ arụmọrụ dị ka anụ aak, obere spatter, mfe slag mwepụ na ọchịchị-ikike wdg Better wụrụ awụ ọdọ mmiri akara, ike aak ike na miri penetration na vetikal-ala ọnọdụ.
PA, PB, PC, PD, Pee, PF, PG
Ngwunye ọkụ anyị na-ekpo ọkụ bụ nke dị ntakịrị spatt, obere smog, arc kwụsiri ike, mfe ịgbanye, obere ihe mkpofu na wdg. The kasị mkpa uru nke anyị ịgbado ọkụ electrode na-apụ slag na-akpaghị aka.
CHEMICAL mejupụtara ALL WELDS metal: (Wt.%)
Ahụkarị ọrụ usoro: (DC +)
Nke gara aga: Wkwado ntụ ntụ: E6013
Osote: E71T-GS- gbanyụọ ọkụ ịgbado ọkụ waya